Sidee loo helaa fiisada ardayda ee Kanada? - ALinks
Si aad wax uga barato Kanada, waxaad u baahan doontaa inaad dalbato ruqsad waxbarasho oo Kanadiyaan ah, oo u shaqeysa sidii fiiso arday inta lagu jiro muddada aad joogto. Haddii koorsadaada ama barnaamijkaagu yahay lix bilood ama ka gaaban, uma baahnid ruqsad waxbarasho oo Kanadiyaan ah. Si kastaba ha noqotee, dalbashada ogolaanshaha kahor imaatinkaaga Kanada waxay noqon kartaa fikrad caqli-gal ah - haddii kale, haddii aad go'aansato inaad ku sii wadato barashadaada barnaamij kale, waa inaad ka tagtaa Kanada si aad uga dalbato ogolaansho waxbarasho adigoo u maraya xafiiska fiisaha.
Sidee loo helaa fiisada ardayga ee Kanada?
Waad ka dalban kartaa rukhsad waxbarasho Kanada gudaheeda online ama adoo u gudbinaya codsi warqad ah Jinsiyadaha iyo Socdaalka Kanada (CIC). Codsiyada waraaqaha guud ahaan waxay qaataan laba jeer inta ay ka badan yihiin kuwa internetka.
Waxaad u baahan doontaa kaarka amaahda / kaarka deynta si aad uga dalbato khadka tooska ah, iyo sidoo kale awoodda aad ku soo saari karto nuqulada elektarooniga ah ee dukumiintiyadaada taageeraya (tusaale ahaan adigoo adeegsanaya qalabka wax lagu sawiro ama kamaradda). Xafiiska fiisaha ee dalkaaga ayaa ku siin doona tilmaamo sax ah oo ku saabsan dukumiintiyada ay tahay inaad soo gudbiso; tilmaamahaani way kala duwanaan doonaan iyadoo lagu saleynayo goobtaada.
Immisa lacag ah ayaa looga baahan yahay fiisaha ardayda Kanada?
Lacagta ugu yar ee looga baahan yahay inaad isku ilaaliso arday ahaan (iyo xubnaha qoyska ee la socda):
Haddii aad aadeyso Dibedda Quebec-
Dadka imanaya Kanada
Tirada lacagta loo baahan yahay sanadkiiba (oo aan ku jirin waxbarashada)
Tirada lacagaha loo baahan yahay bishiiba (oo lagu daro waxbarashada)
Adiga (ardayga) CAN $ 10,000 CAN $ 833
Xubinta koowaad ee qoyska CAN $ 4,000 CAN $ 333
Xubin kasta oo dheeri ah oo la socota qoyska CAN $ 3,000 CAN $ 255
Haddii aad aadeyso Quebec-
Tirada lacagaha loo baahan yahay sanadkiiba (oo lagu daro waxbarashada)
Adiga (ardayga) CAN $ 11,000 CAN $ 917
Xubinta koowaad ee qoyska (18 sano ama ka weyn) CAN $ 5,100 CAN $ 425
Qofka koowaad ee qoyska (kayar da'da 18) CAN $ 3,800 CAN $ 317
Xubin kasta oo dheeri ah oo qoyska la socota (18 sano ama ka weyn) CAN $ 5,125 CAN $ 427
Xubin kasta oo dheeraad ah oo qoyska ka mid ah oo la socda (ka yar da'da 18) CAN $ 1,903 CAN $ 159
Waa maxay shuruudaha fiisada ardayga ee Kanada?
Codsigaaga Visa Visa Visa ee ardayga, waxaad caadi ahaan u baahan doontaa waxyaabaha soo socda:
Nuqulada shahaadooyinka 10aad, 12aad, iyo shahaadooyinka shahaadada ee la caddeeyay
2 tixraac cilmiyeed
2 talo bixin oo ka timid shaqabixiyeyaashii hore
SOP (nidaamka hawlgalka caadiga ah) (Bayaanka Ujeedada)
Shahaadooyinka guusha ee manhajka ka baxsan
warqad aqbalid ah oo ka timid hay'addaada waxbarasho
Caddaynta ilaha dhaqaale
Sawirro cabbirka baasaboorka ah
Ogolaansho waxbarasho iyo fiiso
Haddii ay jiraan shuruudo dheeri ah, jaamacaddaada ayaa ku soo wargelin doonta ka hor intaadan gudbin arjigaaga.
Ma fududahay in la helo fiisaha ardayga ee Kanada?
Dusha sare, helitaanka fiisada ardayda Kanada waxay umuuqataa inay tahay geedi socod fudud, laakiin way adkaan kartaa mararka qaarkood. In kasta oo arday badani aaminsan yihiin in helitaanka warqadda ogolaanshaha ay tahay culeyska ugu daran ee horudhaca daraasadda dibadda, helitaanka fiisada ardayga xitaa way ka sii adkaan kartaa.
Mudo intee le'eg ayay qaadanaysaa in la helo fiisaha ardayga ee Kanada?
Waqtiga lagu shaqeynayo ee ruqsadda waxbarasho ee Kanadiyaanka ah waxay qaadan kartaa illaa 90 maalmood kadib markaad gudbiso codsigaaga, hase yeeshe, caadi ahaan way ka dhakhso badan tahay. Tani waxay sidoo kale kuxirantahay xaalada arimaha wadankaaga hooyo. Waad ku heli kartaa rukhsaddaada waxbarasho si dhakhso leh adoo isticmaalaya durdurka Tooska ah ee Ardayda.
sida loo helo fiisada ardayga ee canadafiisaha ardayda ee Kanada
Fiisaha Turkiga ee muwaadiniinta Pakistan
Fiisaha Kanada ee Baakistaan!
Fiisaha Jarmalka ee Hindida
10 Jaamacadood ee ugu Fiican Hong Kong
Ku sii jeeda Danmark, Waa kuwan shuruudaha Codsiyada Visa